musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Kwayedzwa uye Kwayedzwa: Boot Camp muSunning Seychelles
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
Seychelles Boot Musasa
Boka revanoda kugwinya kubva kuRussia vakawana yakanakisa tropical adventure mune ichangopfuura Seychelles boot camp escapade.
Iyo Slim Fit Club bhuti musasa ndeye "yepamusoro-kumagumo" nyaya uye nzvimbo dzinoshamisa dzinosarudzwa kupokana nevatori vechikamu.
Chinangwa chemusasa webhuti ndechekusundira muganho wemunhu.
Pakati pemazuva avo gumi vari pachitsuwa, vashanyi vanobva kuRussia vakatora chikamu mukuita zviitiko zvakasarudzika sekukanda zipi uye kukwira matombo kuConstance Ephelia Resort.
Luxury Boot Camp - Chaizvoizvo Chinhu!
Chiitiko chegore rega, iyo Slim Fit Club bhuti musasa ndeye "yepamusoro-kumagumo" nyaya uye nzvimbo dzinoshamisa dzinosarudzwa kupokana nevatori vechikamu.
Nzvimbo yakasarudzwa inofanirwa kukwanisa kupa mikana yakakwana yemitambo uye zviitiko zvekushanya, zvakawanikwa zvetsika nemagariro enzvimbo, nenzvimbo yakakodzera kupokana nekusimba kwevatori vechikamu. Seychelles yakasarudzwa kwete chete nerunako rwechisikigo asi zvakanyanya kukosha, kusarudzika kwayo.
Tichifunga nezvekurapa kwoumbozha kubva pakuenda, mutakuri weRussia Aeroflot akapa macheki macheki maviri kune vatori vechikamu pakubva kuSheremetyevo Airport pamwe nemari yekuwedzera neyemikwende, zvipo zvine mucherechedzo uye internet yekubvumirana.
Ndichiri munzvimbo yekuenda, ndakatsvaga masevhisi evanoshanda navo, kusanganisira 7º Maodzanyemba neCreole Travel Services, ayo aipa masevhisi avo akanaka uye kubatana kuti vaone chiitiko chinobudirira.
Kuongorora Miganhu Yenyama
Chinangwa chemusasa webhutsu kuve wekusundira muganho wako, chimwe chezviitiko zvikuru pakarenda remadzimai eSlim Fit Club kwaive kukwira kuenda pamusoro peMorne Blanc neDans Gallas, zviitiko zviviri zvinoisa mukana wemuviri wavo pamuedzo vachinakidzwa nzira mbiri dzinoyevedza pachiwi chikuru cheMahé. Akakomberedzwa nemasikirwo, Polina Kitsenko nevashandi vake veSlim Fit vakashinga makomo marefu uye mwando wakakwirira, vachizviita kumusoro nedambudziko diki, rakapihwa mubairo wekutora mweya kufema parwendo.
Pakati pemazuva avo gumi vari pachitsuwa, vashanyi vanobva kuRussia vakatora chikamu mukuita zviitiko zvakasarudzika sekukanda zipi uye kukwira matombo kuConstance Ephelia Resort kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwemahombekombe eMahé.
Pamazuva avasina kubuda kunze kwehotera, chirongwa ichi chaive chisina kushushikana, vatori vechikamu vaichengetwa vakabatikana nemabasa akati wandei ega uye eboka. Izvi zvaisanganisira mitambo yekudzidzisa mitambo katatu pazuva.
Unwinding Creole Maitiro
Rainge risiri basa rese revaSlim Fit Club vanoshandisa zvakanakisa rwendo rwakatanhamara rweSatani Anne Marine Park iyo yaisanganisira kushanya nekushanya kweMoyenne Island, paki yenyika diki diki yakapihwa vanhu ve Secheres naimbove mutori venhau uye wemazuva ano Robinson Crusoe, Brendon Grimshaw, uye chinyakare chiCreole barbeque pamhenderekedzo.
Vakachengetwa mune imwe yekugara kweChina Seasons Resort Seychelles (izere zita rehotera nenzvimbo), vasikana vakaitirwa kupati yechiCreole pasi pemusoro wenyaya unoti 'Mwenje weMwedzi muParadhiso' kuti vatore musasa wakabudirira webhutsu. Pirates ichifananidzwa ne iyo Seychelles, ichi chikamu chisinga nzwisisike chenhoroondo yechitsuwa chakapembererwa kuburikidza nekirasi yekusanganisa mukubatana nevagadziri vedoro vemuno Takamaka Rum pasi pemusoro wenyaya 'Mukutsvaga kwePfuma'.
Social Media uye Zvimwe
Kugadzira zvakanaka uye zvemhando yepamusoro zvemukati, zvichiratidza kusiyana kwenzvimbo, chimiro chayo, maruva nemhuka, mahombekombe, zviitiko zvinopihwa uye zvimwe zvakawanda, Mai Kitsenko, anoshinga uye ane mukurumbira mukurudzira, akasimbisa nehunyanzvi zviitiko zvezuva nezuva kune yake yakawanda vatengi vekumusoro-mhiri muRussia pane ake enhau enhau.
Vamwe vatori vechikamu vakatumira uye vakagovana nyaya dzezvavanowana kubva kuSychelles, vachiratidza zviwi zveIndian Ocean archipelago senzvimbo yakasvibira uye inonakidza.